ဆယ်အိမ်ခေါင်း ရွှေတိုက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ဆယ်အိမ်ခေါင်း ရွှေတိုက်
Posted by black chaw on Jul 3, 2012 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing, Short Story | 44 comments
မခင်အုပ် စိတ်ပူစပြုသည်။ သူမယောက်ျား ရွှေတိုက်ကို သူကြီးခေါ်ခိုင်းသည်ဟု ဆိုကာ သူကြီးတပည့်ချာတူး လာခေါ်သွားသည်မှာ နေ့လယ်ခင်း ကတည်းက ဖြစ်သည်။ အခု ညနေ ၅ နာရီထိုးခန့် ရှိနေပြီဖြစ်သည့်တိုင် ရွှေတိုက် တစ်ယောက်ပေါ်မလာသေး။ ဘယ်လို ပြသနာအရေးများ ဖြစ်နေကြသလဲ တွေးပြီး မခင်အုပ် စိတ်ပူနေပါပြီ။ ထိုစဉ် အိမ်ရှေ့ဆီမှ ရွှေတိုက် သူငယ်ချင်း ဗိုက်ဗိုက်စိန် အသံကိုကြားလိုက်ရသည်။
“ရွှေတိုက်ရေ၊ သွားကြစို့ဟေ့၊ နောက်ကျနေပြီ”
ဒီလို ညနေချိန်ဆို ရွှေတိုက်နှင့် ဗိုက်ဗိုက်စိန်တို့ သူငယ်ချင်းတစ်သိုက် ရွာလယ်ရှိ ချောင်ယွန်မတ်၏ အမိန့်ရ ဘီအီးဆိုင် လေးမှာ တစ်ခွက်တစ်ဖလား သောက်နေကြ။ ရွာထဲမှ အပျိုများအကြောင်းအရက်ကလေးတမြမြ နှင့် ဆွေးနွေးငြင်းခုန်နေကြ။ ဆိုင်ပိုင်ရှင် တရုတ်ကြီး ချောင်ယွန်မတ်မှာလည်း ဂေါ်မစွံလူပျိုကြီးဆိုတော့ ရွှေတိုက်တို့ ပြောသမျှ မိန်းမအကြောင်းတွေကို မစားရညှော်ခံ အရသာခံနားထောင်နေကြ။ တစ်ခါတစ်လေများ မိန်းမတွေ အကြောင်းကောင်းကောင်းလေးတွေ နားထောင်ရပြီဆို အမြည်းတောင် အလကားထည့်ကျွေးတတ်သည့် လူပျိုကြီး ဖြစ်ပါသည်။ ဒီနေ့ နည်းနည်းနောက်ကျနေသဖြင့် ဗိုက်ဗိုက်စိန်က ရွှေတိုက်ကို လောအော် အော်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
“ရွှေတိုက် မရှိဘူး ကိုဗိုက်ရေ၊ သူကြီးတပည့်ချာတူးလာခေါ်သွားတာ နေ့ခင်ကြောကတည်းကပဲ၊ အခုထိကို ပြန်မရောက်သေးဘူး”
ရွှေတိုက်ကို ခေါ်တယ်၊ ဟုတ်မှလည်း လုပ်စမ်းပါ မိအုပ်ရယ်၊ သူကြီးနဲ့ ရွှေတိုက် ဘယ်တုန်းကမှ မျက်နှာချင်းဆိုင်လို့ မရခဲ့တာ တစ်ရွာလုံးသိနေတာကြီးကို”
“ဟုတ်တယ် ကိုဗိုက်ရေ၊ အခု တကယ်ကြီးကို လာခေါ်သွားတာပါရှင်၊ မယုံရင် သူကြီးအိမ်လိုက်သာသွားတော့”
မခင်အုပ် စိတ်မရှည်တော့သဖြင့် အငေါ်တူးပစ်လိုက်သည်။
“ဟာ သူကြီးအိမ်လိုက်သွားမယ့်အစား ကျားမှီးပဲ ပြေးဆွဲလိုက်တော့မယ်ဟေ့။ ရွှေတိုက် လာရင်သာ ပြောလိုက်တော့ ငါ ချောင်ယွန်မတ် ဆိုင်မှာ သောက်ရင်းစောင့်နေမယ်လို့”
မခင်အုပ် နှင့် ရွှေတိုက် တို့ အိမ်ထောင်ကျတာ တစ်နှစ်ကျော်ကျော်လောက်တော့ကြာပါပြီ။ မခင်အုပ်တို့ မိဘတွေက လယ်ပိုင်ယာပိုင်တွေနှင့် စားနိုင်သောက်နိုင် ရွာ့မျက်နှာဖုံးများဖြစ်သည်။ ရွှေတိုက်ကတော့ မိဘတွေ မရှိရှာတဲ့ တစ်ကောင်ကြွက်။ သို့ပေမယ့် ရွာမှာ တစ်ဦးတည်းသော ရှစ်တန်းအောင်သူဖြစ်သဖြင့် သမီးရှင်တွေက ပညာတတ်ကလေး ဆိုပြီး သားမက်တော်ချင်နေကြသည့်ကြားမှ မခင်အုပ် နှင့် ညားခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ ရုပ်ရည်ကလေးကလည်း ကိုးရီးယားမင်းသားလေးလို ချောမောသဖြင့် ရွာကာလသမီးများ၏ မျက်နှာပေးခြင်းကို ခံရသူဖြစ်သည်။
မခင်အုပ် မှာ ရွှေတိုက် ကို တုန်နေအောင် ချစ်သူဖြစ်သဖြင့် ရွာရှိ လူငယ်တွေလို လယ်ထဲမဆင်းခိုင်းရက်။ အိမ်မှာပင် သက်သာသလို နေစေခဲ့သည်။ ညနေချိန်များဆိုလည်း ရွာထဲက ရွှေတိုက် သူငယ်ချင်း ဗိုက်ဗိုက်စိန် နှင့် အရက်ဆိုင်သွားသည်ကိုပင် ရွှေတိုက်အိပ်ထဲ ပိုက်ဆံ ထည့်ပေးနေကြ။ အဲသည်လောက်ချစ်သည့်လင်။
အခု ပြန်ချိန်တန်လို့ ပြန်မလာတော့ စိတ်ပူရသည်ပေါ့။
“အုပ်အုပ်ရေ.. ထမင်းပွဲ ပြင်ဟေ့”
ဟု ပြောပြီး ရုပ်တည်ကြီးနှင့် ၀င်လာသော လင်တော်မောင် ကိုရွှေတိုက်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။
“ကြာလိုက်တာ ကိုရင် ရယ်၊ ဘာတွေများ ပြောနေဆိုနေကြလို့ ဒီလောက်ကြာနေရတာလဲ။ ခုနက ကိုဗိုက်တောင် ဆိုင်ကိုသွားနှင့်ပြီ လိုက်ခဲ့လို့ အော်သွားသေးတယ်။ လိုက်မသွားတော့ဘူးလား”
လင်တော်မောင်၏ ညနေတိုင်း ပြုနေကျ အရက်သောက်ဖို့ မေ့များသွားလေသလား ဆိုပြီး သွေးထိုးစမ်း မေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
“ဟာ ဒီကောင် ငဗိုက် လုပ်တာနဲ့ ကျုပ် သိက္ခာကျတော့မှာပဲ။ နောက်လာခေါ်ရင် တစ်ခါတည်းအပြတ်ပြောထား လိုက်။ ရွှေတိုက် အရက်မသောက်တော့ဘူးလို့၊ အဲဒီ တရုတ်ဘိန်းစား
ချောင်ယွန်မတ် ဆိုင်ကိုလည်း ဘယ်တော့မှ မသွားတော့ဘူးလို့”
မခင်အုပ် အံ့သြသွားသည်။ အံ့သြ၀မ်းသာ ဆိုတာက ပိုမှန်ပါလိမ့်မည်။ ယောက်ျား နေ့တိုင်းအရက်သောက်နေတာ ကို ကျေနပ်နေသည့် မိန်းမ ဒီကမ္ဘာမှာ ရှိလိမ့်မည်ဟု မထင်ပါ။ အခု ရွှေတိုက်က အရက်မသောက်တော့ဘူး ဆိုတော့ ပျော်လိုက်သည့်ဖြစ်ခြင်း။ အင်းဒီနေ့တော့ ငါ့ယောက်ျား စိတ်ချမ်းသာအောင် လိုက်လိုက်လျောလျောနေမှဟုလည်း တွေးလိုက်မိသည်။
ဗုဒ္ဓေါ ထမင်းဝိုင်းပြင်စေ ဆိုပါလား။ အပြောအဆိုတွေလည်း ထူးလို့။ တစ်ခုခုတော့ တစ်ခုခုပဲ။ အို ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အရက်မသောက်တော့ဘူးဆိုတဲ့ စိတ်လေး ပြောင်းသွားဦးမယ်၊ အသာ နေမှ ဟုတွေးပြီး ကြမ်းပြင်မှာ စားနေကျ ထမင်းဝိုင်းကို စားပွဲအစုတ်သေးသေးလေး ပေါ်တင်ပြီး ပြင်ပေးလိုက်သည်။
ထမင်းပွဲ ဆိုလို့ အထင်မကြီးပါလေနှင့်။ ငါးပိရည်ကျိုတစ်ခွက်၊ နောက်ဖေးက ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထားတာလေးတွေ ခူးပြီး တို့စရာလုပ်ထားတာက တစ်ပန်းကန်၊ ဘဲဥချည်ရည်ဟင်းပန်းကန်လေးထဲက ဘဲဥလေးနှစ်လုံး၊ ဒါပဲဖြစ်သည်။
ဒါကိုပင် ရွှေတိုက်က ထမင်းပွဲပြင်စေဗျားလို့ ပြောခြင်းဖြစ်သည်။
သူမလင်တော်မောင်ကို သူမ ချစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်ပြောချင်သလိုသာ ပြောပေ့စေ။
ထမင်းစားပွဲ ရှေ့ချပေးလိုက်တော့မှ သတိထားမိသည်။ ရွှေတိုက်မျက်ဝန်းမှာ မျက်ရည်တွေ ၀ဲလျက်ပါလား…။
ဘုရားရေ…။ သူကြီးနဲ့ ငါ့ယောက်ျား ဘာများဖြစ်ခဲ့လေသလဲ။ ဒီသူကြီးဆိုတဲ့လူကြီးက အတော်ဂွကျတဲ့လူကြီး။ ငါ့ယောက်ျားကို တစ်ခုခုများလုပ်လို့ကတော့ သင်း အိမ်ရှေ့သွားပြီး ထဘီအလံထူပစ်လိုက်ဦးမယ်။
“ကိုရင် မျက်ရည်တွေဝဲလို့ပါလား။ မထိတ်သာ မလန့်သာ ရှိလိုက်တာ၊ ဘာများဖြစ်လို့လဲ၊ အုပ်အုပ် ကိုပြောပါဦး”
“အော် အမေ၊ အမေ၊ အသေစောရှာတယ်။ အမေချစ်တဲ့သား ငရွှေတိုက် တစ်ယောက် အခုလို ရာထူးရာခံတွေနဲ့ ကြီးပွားနေပြီဆိုတာ သိမသွားလိုက်ရရှာဘူး”
မခင်အုပ် အံ့သြသွားသည်။ ရာထူးရာခံတွေနဲ့ ကြီးပွားနေသတဲ့။
“ဘယ်လိုရာထူးရာခံတွေလဲ ကိုရင်ရယ် အုပ်အုပ်ကိုလည်း ရှင်းပြစမ်းပါဦး”
ရွှေတိုက် က ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ ပြောလိုက်ပါသည်။
“မင်းယောက်ျား ရွှေတိုက်က အရင် ရွှေတိုက် မဟုတ်တော့ဘူးကွယ်။ တောင်ဘက်က ငါးအိမ်၊ မြောက်ဘက်က ငါးအိမ်ကို ဆယ်အိမ်ခေါင်းလုပ်အုပ်ချုပ်ဖို့ သူကြီးက ခန့်အပ်လိုက်ပြီကွဲ့။ အခု ဆယ်အိမ်ခေါင်း ရွှေတိုက် ဖြစ်သွားပြီ။ အဲဒါကို အမေသာရှိရင် ဘယ်လောက်ဂုဏ်ယူလိုက်မလဲ…ဆိုပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာပါကွယ်၊ အော် အမေအမေ
ထပြီး ကြည့်လှည့်စမ်းပါတော့၊ အမေ့သားရွှေတိုက် အခု ကောင်းစားနေပြီဗျ အမေရ”
လေးတန်းသာအောင်ထားသော မခင်အုပ် အဖို့ သူ့ယောက်ျား ရှစ်တန်းအောင် ရွှေတိုက်၏ စကားက ထီပေါက်သကဲ့သို့ ၀မ်းသာပီတိဖြစ်စေခဲ့ပါ၏။
“၀မ်းသာလိုက်တာ ကိုရင်ရယ်။ ရွာထိပ်က ဗေဒင်ဆရာ ကိုရင်စည်သူ ဟောချက်များ ကွက်တိကို မှန်နေတော့တာပဲ။ နင် တစ်နေ့ ကတော် ဖြစ်ဦးမှာတဲ့…။ ဟောချက်များ ကွက်တိပဲတော်။ အခု ဆယ်အိမ်ခေါင်းကတော် ဖြစ်ပြီလေ။ အဖေနဲ့ အမေတို့ သိရင်လည်း ၀မ်းသာလိုက်ကြမယ့် ဖြစ်ခြင်း။ ဒါနဲ့ ဆယ်အိမ်ခေါင်းဆိုတာ စစ်တပ်မှာဆို ဘာရာထူးလောက် ရှိမလဲ ကိုရင်ရယ်”
ရွှေတိုက်က ခက်ခက်ခဲခဲ စဉ်းစားရလေဟန်ဖြင့်
“အင်း…။ စစ်တပ်မှာဆိုရင်တော့ ဗိုလ်ကြီး ရာထူးလောက် ရှိလိမ့်မပေါ့ကွယ်”။
မခင်အုပ် ကျေနပ်သွားပါသည်။ ဆယ်အိမ်ခေါင်းကတော် ဖြစ်ခွင့်ရခဲ့သဖြင့်လည်း လင်တော်မောင် ရွှေတိုက်ကို ပိုမိုလေးစားချစ်ခင်စိတ်များ တစ်ဖွားဖွားပေါ်ပေါက်လျက်သာ ရှိနေခဲ့သည် ဟူသတတ်။
“သူကြီးက တစ်ခါတည်း မှာလိုက်တယ်။ မင်းဟာ သာမန်လူတစ်ယောက်မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့။ တောင်ငါးအိမ် မြောက်ငါးအိမ် အိမ်ဆယ်အိမ်ရဲ့ အကျိုးကို သယ်ပိုးထမ်းရွက်ဖို့ တာဝန်အပ်နှင်းခြင်းခံရပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အရက် မသောက်တော့ဖို့လည်း မှာလိုက်တယ်။ ဒီတော့ ဒီနေ့က စပြီး ဗိုက်ဗိုက်စိန်တို့ နဲ့ ဆိုင်မှာ အရက်သွားမသောက်တော့ဘူးကွယ်။”
သူ့ယောက်ျား အရက်မသောက်တော့ဘူးဆိုသဖြင့် မခင်အုပ်ပျော်သွားပါသည်။ သို့သော်…
“အိမ်မှာပဲ ၀ယ်ပြီး လူမသိအောင် ခွက်ပုန်းလေးပဲ သောက်တော့မယ်”
ဟု စကားက ဆက်ပါလာသဖြင့်
“အို ဆိုင်မှာ သွားသွားသောက်နေတာထက်စာရင် အိမ်မှာ လူမသိသူမသိသောက်တာက အများကြီးသာပါသေးတယ်” ဟု အတွေးကို ဆက်တွေးလိုက်ရပါတော့ သတည်း…။
နောက်နေ့တွင်တော့ ရွှေတိုက် တို့ လင်မယားအိမ်အ၀င်ဝမှာ ဆိုင်းဘုတ်သေးသေးလေးတစ်ခု ချိတ်ဆွဲလျက် တွေ့ရပါသည်။
(၀န်ခံချက် ။ ။ ဆရာတက္ကသိုလ်မင်းမော် ၏ ကျုပ်တို့ရွာက ဆယ်အိမ်ခေါင်းကဗျာအား မှီငြမ်းရေးသားပါသည်)
ဟာသတွေ မရေးပါနဲ့လားဗျာ …
ဟင့် ..ဟင့် …
လွတ်ကျသွားတဲ့ ဘီယာဂျား ..
အဲ့လေ.. ဖလား ….
ပြီးလို့တော့ မရဘူးထင်တယ်နော်.. တစ် ပြီးတာဘဲ ဖြစ်ပြီး နှစ် သုံး ဆက်လာဖို့ ဒီမို ရွာက ၀ိုင်းတောင်းဆိုလိမ့်မယ်နော် … ချောင်ယွန်မတ်တို့ ဗိုက်ဗိုက်စိန်တို့ က ဒီလို ဘယ် အလွတ်ပေးလိုက်မလဲ။ :grin: :grin:
ဆယ်အိမ်ခေါင်း ဗိုလ်ကြီး ရွှေတိုက်ခမျ…
ကျနော့်ကိုလဲ မေ့မထားပါနဲ့ …..
အင်းပါ ဦးလေးရယ် ကားပါမစ်တွေ သူကြီးဆီက ပြောပေးပါမယ်ဗျာ….. ငှဲငှဲငှဲ…
အာဒကေ လေးတော့ လာထားနော်…ငွင်းငွင်းငွင်း
ရုပ်၇ည်လေးကျ ကိုရီးယားမင်းသားနဲ့ တူပြီး အရပ်လေးကျမှ မသိမသာလေးကွာသွားတယ်နော် ကိုရွေတိုက်….
ရုပ်ပြလေးပါဆွဲလိုက်ရင် ပိုမိုက်သွားမယ်.. ဦးဦးဘလက်အခန်းဆက်ရေးရင်တော့ ရုပ်ပြစာအုပ်ကောင်းကောင်းထုတ်လို့ရတယ်နော်..
.. ယောက်ျား နေ့တိုင်းအရက်သောက်နေတာ ကို ကျေနပ်နေသည့် မိန်းမ ဒီကမ္ဘာမှာ ရှိလိမ့်မည်ဟု မထင်ပါ။
တချို့.. ဂငယ်ဂျပန်မတွေအတွက်တော့.. မှားမယ်ထင်မိတယ်..
ဂျပန်ပြည်ဆင်းရဲတုံးကများ.. ဆာကေးကို.. ကြက်ဥအစိမ်းနဲ့.. မျှောချရင်..ကိုးဆယ့်ခြောက်ပါးပျောက်တယ်.. ယုံကြတဲ့.. ဆေးပဲ..
အဲ့ဒီ့ နိဟွန်းရှူး ကို တဲ့ဘစကိ လေးနဲ့ …အကျအန
သောက်ခိုင်းပီး ငတိဒွေ ရီဝေ ထုံထိုင်းလာမှ ..
ဆမန်သာ ဗယ်ဂါ လေး …လျူးဝစ်စ် ဗစ်တန်လေး
ပူဇာတတ်ကြသေး … နားအေးပီးရော ဂေါင်းငြိမ့်မိ..
(တမင်ငြိမ့်တာလား ဇက်ကျိုးကျတာလား မဆိုနိုင်)
လကုန်လို့ ဆေဲးကျူး ရောက်လာမှ …အော်မယ်ငီး..
အလာ ကယ်ပါ အသွား ကယ်ပါ ..အသွားအပြန် ကယ်ပါ…
မျက်ရည်များတောင် လည်လာဘီ …
ကျေးဇူးပါသူကြီးမင်းရယ်…. အိမ်က ချစ်သု.အုပ်က ကျေးဇူးဆပ်တဲ့အနေနဲ. သူကြီးကတော်ကို မန်းတလေး ကြိုးကြီးချိတ် စပယ်ရှယ်အော်ဒါ နှစ်ထည်နဲ. သူကြီး အတွက် ချိပ်ပက်ခ် ငှက်ပျောဖူး တစ်လုံး လက်ဆောင်ပေးခိုင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ…….
စိတ်ဆိုးလား ဟင်……….. ခိခိ
သူအိပ်တယ်လေး တဲ့ 
အလယ်တန်းတုန်းကသင်ဖူးတဲ့ ကဗျာလေး ဆိုတော့ 
ခေါင်းကတော် ဘယ်ကိုများနှိတ်သလဲလို့သိချင်သေးဗျာ ။
အူးဘလက်စာကိုဖတ်ပြီး အူးဆာမိ ကွန်မင့်ကိုဖတ်ပြီး ဆက်လက် အုန်းစားသည်။
ဟေ ဖရဲမ ဆယ်အိမ်လေးတော့ ထည့်ခေါ်ပါအေ…ညည်းနှယ့် ခေါင်း တဲ့ အသည်းယားထာအေ…..
နီနဲ.ဆက်ဆံနေကြ နာမည်တွေ မခေါ်ပါနဲ.အေ………..ဟိဟိဟိဟ
” ဟေ ဖရဲမ ဆယ်အိမ်လေးတော့ ထည့်ခေါ်ပါအေ…ညည်းနှယ့် ခေါင်း တဲ့ ”
အမှန်ကတော့ နာမည်လေးသာ ဆိုးတာပါ ။
အလုပ်လေးကတော့ ။ ဟဲဟဲ ။
အဘ အိမ်က Home minister ကသာခွင့်ပြုရင် ၊
အားတဲ့ အချိန်တွေမှာ လုပ်အားပေး တောင် သွားလုပ်မလားလို့ ။
အော်.. တနေ့တုန်းက ၃၅၀၀ နဲ့ ဈေးမှာ သွားရောင်းမယ် ဆိုပြီး ပြောနေလို့ စိတ်ဆိုးသွားတာ.. အခုတော့လည်း ရာထူးရလို့ အဆင်ပြေသွားပြီ နဲ့တူတယ်။
သူကြီး…ဂေဇက်ရွာထဲမှာဆိုရင် ဆယ်အိမ်ဆိုတာ ဘယ်နားက ဘယ်နားကို ခေါ်တာတုန်း…
ဦးလေးဖြူကြမ်း…. အခန်းဆက်ကို စောင့်နေမယ်နော်…ဒါဗြဲ…
ဂျင်းသုတ်နဲ့ ငရုတ်သီးဟင်းလေး လာပို့ပါတယ်…
ဈေးဦးပေါက် ထောင်ခေါ်ရာခေါ် သိမ်းခေါ်သောင်းခေါ် သူတော်ကောင်းပို.စ်….
ရွှေတိုက်ကတော့ မိဘတွေ မရှိရှာတဲ့ တစ်ကောင်ကြွက်။ သို့ပေမယ့် ရွာမှာ တစ်ဦးတည်းသော ရှစ်တန်းအောင်သူဖြစ်သဖြင့် သမီးရှင်တွေက ပညာတတ်ကလေး ဆိုပြီး သားမက်တော်ချင်နေကြသည့်ကြားမှ မခင်အုပ် နှင့် ညားခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ ရုပ်ရည်ကလေးကလည်း ကိုးရီးယားမင်းသားလေးလို ချောမောသဖြင့် ရွာကာလသမီးများ၏ မျက်နှာပေးခြင်းကို ခံရသူဖြစ်သည်။
ဦးဘလက်ရယ် အဲလိုကြီးပြောတော့ ဒီက ရှက်ထာပေါ့လို. အဟင့်…
ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ကွက်ကို ကဗျာလေးဖတ်ယုံနဲ. သရုပ်ဖော်ရေးသားနိုင်တဲ့ ဦးဘလက် လက်စွမ်းကတော့ ပီပြင်ပ…(ဒါပေမယ့် ချစ်သူ.အုပ်ကလေးကတော့ ဒီပို.စ်ဖတ်နေရင်း လက်တွေ ယားနေလောက်ရောပေါ့အေ… အဟင့်အဟင့် ပြောရင်းဆိုရင်း နားတွေ ယားလာလိုက်တာ… ခိခိခိ)
ဦးဘလက်ကို ဘလက်တက်စီနဲ.ခေါ်ပီး ဘလက်လေဘယ်နဲ. ရွာထိပ်က ချောင်ယွမ်မတ် ဆိုင်မှာ ဧည့်ခံရမယ်…. (ဒါပေမယ့် ဦးဘလက်ရယ် ကျွန်တော် အဖေကတော့ ၄၂နှစ်မှာ ဆုံးသွားတယ်ဗျာ……
ခိခိခိ ခစ်ခစ်ခစ် ခွိခွိခွိ B-)
ရွာထဲ မရောက်တာ တစ်ရက်နှစ်ရက်ရှိသေးတယ်…
မခင်အုပ်ကို..ဗိုက်ဗိုက်စိန် နဲ့ ရွှေတိုက်.
သြော် … အမေ …. အမေ
ကျုပ်တို့ရွာက ဆယ်အိမ်ခေါင်း။ ။
တောင်ငါးအိမ် မြောက်ငါးအိမ် ပိုင်တာနဲ့ငါနဲ့ဘီအီးတွဲမသောက်တော့တာ
အဆင့်တန်းခွဲတဲ့ ခေါင်းမောင်တိုက်ကိုအပိုင်ပေးထားတဲ့ တောင်ငါးအိမ်ထဲက ကျော့် အိမ်ကို ဖယ်ပေးဘာ.
ကိုးအိမ်ခေါင်း ဦးအောင်တိုက် ဆိုပြီး အိမ်ရှေ့ မှာ စာပြန်ချိတ်ထားပါ..
မပြင်ဆင်ပါက ဘင်္ဂလီတွေလို မီးနဲ့ ရှို့ ပါမည်.. (ထမင်းချက်တဲ့အခါ ထင်းတွေကိုရှိ့ မှာပြောတာဘာ..)
တယ်ရင်းကယဲ တွာ…မင်းအဲလို မကျောရဘူးလေ..နာနဲ.မင်း ဟိုးငယ်ငယ်လေးကတည်းက အတူသောက်ဖော်သောက်ဖက်တွေပဲဟာ…ကဲကဲ မင်းကျေနပ်အောင် နာ လိုက်သောက်ပေးပါမယ်..လာကွာ မင်းတစ်ခွက် နာတခွက်..အေ့…
တယ်ရင်း မင်းအိမ်လေးတော့ ထည့်ပါကွာ.နော်နော်…ငါမှာ ဒီရာထူးလေး အခုမှရတာ ကိုးအိမ်ခေါင်းတော့ မလုပ်ပရစေနဲ.အေ့….
မင်းမီးရှို.မယ်ဆိုလဲ ကြိုပြောနော်..ဘယ်အိမ်အရင်ရှို.မလဲ..ငါအရင်ဦးအောင် ငြိမ်းပြီး ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ.လေး ယူအုံးမှာ ဟိဟိဟိဟိ….
အဟွတ်.. အဟွတ် ..
အမယ်လေး .. ကော်ဖီတောင်သီးတယ် ဘဘ ဘလက်ရယ်
အပေါ်က ကွန်မန့်တွေကြည့်လိုက်တော့ ဦးရွှေတိုက်အုပ်ချုပ်တဲ့ဆယ်အိမ်ထဲမပါတော့ဘူး
ဒါကြောင့် ဂါစရာမလိုဘူး ဂရုစိုက်စရာလည်းမလိုဘူး ဒါဗျဲ
ခေါင်း(ဆယ်အိမ်) ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် :-)
ဦးဘလက်ကတော့ စာရေးကောင်းပါ့။ ဖတ်လို့ကောင်းပါ၏။
ဆယ်အိမ်ခေါင်း ကိုရွှေတိုက် လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကို တလွဲမသုံးရဘူးနော်။
မတရားတာတွေ့ရင် တရားစွဲမယ် အမှုဖွင့်မယ်။
အယ် .. ဒီပို့စ်မဖတ်ရသေးလို့ .. ဆယ်အိမ်ခေါင်းကြီးကို ဇရပ်ထဲမှာ မထီမဲ့မြင်ပြုမိပါတယ် ။
အမိုက်မဲလေးကို ဗွေမယူပါနဲ့ …. ။
ဆယ်အိမ်ခေါင်းကြီးလည်း ကျန်းမာပါစေ ၊ ချမ်းသာပါစေ ၊ အရပ်လည်း ပိုလို့ ရှည်လာပါစေတော် … ဟိဟိ
ဘိုကြီးကို ကျော် တောင်ပန်းပါရရှေ
ဘိုကြီးကို ကျော်..ပေါမှား ရှိုမှားစိရင် ခွလွှတ်ပါ
ကျော့်ကို ဘီအီးပါမစ် ချပေးပါ
ဘီအီးပါမစ် မချပါက ဘိုရီးရဲ့ ကြယ်တစ်ပွင့်ကို ဘတ်ပြီး လပြိုဂျီး အုမတ်ဆီမှာ ဘီအီးအမှောက် ကစ်ပလိုက်ဖို့ဝန်မလေးပါဘု..
နီလွန်းလို့မဲတောင်မဲနေပြီ..
ဟင် နားမလည်တော့ဘူး ကို kyeemite ရဲ့
အဘ နှင့် သောက်ကြတုန်းက အနီ လက်ကျန်ကို
ကို kyeemite ပဲ မသွားတာ မဟုတ်လား ။
ပိုစ့်ကိုဖတ်ပြီးရယ်ပြီးသကာလ ကွန်မန့်များကိုဆက်ဖတ်၍ မျက်ရည်များထွက်သွားပါကြောင်း။ မင်္ဂလာဘားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး ဆယ်အိမ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းရေ တိုက်တိုက်ဆိုတဲ့ ရွှေတိုက်ရေ။ ဆယ်အိမ်ခေါင်းဦးရွှေတိုက်ကို ဂုဏ်တင်ပေး လိုက်တာပါ။ ဟီဟိ
အရင်က ပြောမှားဆိုမှားရှိခဲ့ရင် ခွင့်လွှတ်ပါ။
လူကြီးကို လူကြီးဖြစ်မှန်း မသိလို့ လူကြီးလို မဆက်ဆံမိတာ သည်းခံပါ။
မကျေနပ်ရင် လူကြီးရဲ့ Gossip သတင်းတွေ ထုတ်ပစ်လိုက်မယ်… ကြောက်ပြီလား။
ထပြီး ကြည့်လှည့်စမ်းပါတော့၊ အမေ့သားရွှေတိုက် အခု ကောင်းစားနေပြီဗျ အမေရ”
မင်းအမေတင်မဟုတ်ပါဘူးသားကြီးရယ်… မင်းအဖေလဲ ၀မ်းသာပါတယ်…
ဒါပေမယ့်သားကြီးရေ… မိဘကိုလဲမမေ့နဲ့… သတိရရင် တို့သားအမိသားအဖသုံးယောက်ရိုက်ထားတဲ့ပုံကို ထုတ်ကြည့်…
သူ့ယောက်ျား အရက်မသောက်တော့ဘူးဆိုသဖြင့် မခင်အုပ်ပျော်သွားပါသည်။ သို့သော်…
သားကြီးရေ… အဖေမှာချင်တာက မကောင်းတဲ့အရက်တွေမသောက်နဲ့…
ကောင်းတဲ့အရက်ကိုလဲ ပိုက်ဆံအကုန်ခံမသောက်နဲ့ ကိုယ့်ခေါင်းဖြစ်နေပြီပဲ (ဆယ်အိမ်ခေါင်း) ပို့ဆွမ်းလေးရအောင်… အာဏာလေးပြ… သဒ္ဓါလေးချွေ… သမီးချွေးမက လိမ္မာရင်တော့မင်းအားစိုက်စရာလိုမယ်မထင်ပါ…
ခုမှပဲ အဖေ့မှာတမ်းကို ဖတ်ဖူးတော့တယ်။
လေးစားလောက်ပေ ဆယ်အိမ်ခေါင်း ဖေဖေ ပါလား။
အမှန်တော့ ကျွန်တော် တက္ကသိုလ် မင်းမော် ကဗျာလေး ဖတ်ပြီး
ညီငယ်ရွှေတိုက်အတွက် လည်း အမှတ်တရပေါ့..။
နည်းနည်းလေး ပြုံးမိတယ် ဆိုရင်
ရေးရကျိုးနပ်ပါတယ် ကျောင်းဒကာ ကျောင်းအစ်မ သူတော်ကောင်းကြီးတို့ရေ…။
အပေါ်က သားကို ချစ်တဲ့ ကြောင်ဝတုတ်တို့ လင်မယားနဲ့
သူတို့ ချစ်တဲ့သား မောင်ရွှေတိုက်လေးတို့ရဲ့ ပုံကို
မကြာမီ ဖေါ်ထုတ်တင်ပြသွားမယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း…။
ဆယ်အိမ်ခေါင်းအဖေ ဝေလေလေ . . . .တဲ့
ကြားဖူးတာ . .ကြားဖူးတာ
အိမ်နောက်ဘက်ကနေ သူ့မိန်းမဒေါ်ခင်အုပ်ကို အရင်ကပ်ပေးပြီး ဦးအောင်ဖားထားမှ..ဟီဟိ။
ဆယ်အိမ်ခေါင်းမင်းအဖေ ကြောင်ဝတုတ်က မိန်းမကို ကန်တော့ပြီးအိပ်လို့မှာရှာတယ်။သူ့ရဲ့ကြီးပွားကြောင်း ဆေးနည်းထင်ပါ့။
ဒွေးလေးတို့ကိုလည်း မေ့မထားပါနဲ့နော်။ငါ့တူကြီးကို အားကိုးပါရဲ့။
သိပ်လဲ အားမကိုပါနဲ့ အန်တီရယ်..
တူ့ဘာတူတောင် ရှည်အောင်မလုပ်နိုင်တေးပါဘူး..ဟိဟိ (အရပ်ပြောပါတယ်…)
ဆယ်အိမ်ခေါင်းဖို့ မပြောပါနဲ့ တစ်အိမ်တည်းတောင် မခေါင်းနီုင်တေးပါဘူးတဲ့ ..
(P.S ဘွားတေး ချိတ်ချိုး နဲ့ )
အဲဒီနေ့က ပုလင်းကို ကိုမိုက်ကြီးက ယူခဲ့ပြီးသကာလ
ကျွန်တော့်ကားနဲ့ (ဘလက်တက်စီလေးနဲ့ ဟေးဟေး) အိမ်ကိုပြန်ကြတယ်ပေါ့ဗျာ။
အိမ်ရောက်လို့ ကားပေါ်က ဆင်းတော့ ပုလင်းမေ့နေတယ်ထင်လို့
နောက်တစ်ခါ တွေ့တော့ သောက်ကြတာပေါ့တဲ့။
အခုထိ ရှိနေသေးတယ် အဘရေ။
အဲဒီပုလင်း မြင်တိုင်း အဘကို သတိရရနေလို့
ကြည့်တောင် မကြည့်ရဲပါဘူး အဘရယ်။
Shar Thet Man (92046 Kyats )
monmon (63039 Kyats )